10 सबै भन्दा वान्टेड जोडी ट्रिप्स | एक ट्रेन सेव
घर > यात्रा युरोप > 10 सबै भन्दा वान्टेड जोडी ट्रिप्स
ट्रेन यात्रा ब्रिटेन, ट्रेन यात्रा चीन, ट्रेन यात्रा फ्रान्स, रेल यात्रा हल्याण्ड, ट्रेन यात्रा इटाली, ट्रेन यात्रा स्विजरल्याण्ड, रेल यात्रा गर्नुभएको नेदरल्यान्ड्स, ट्रेन यात्रा यूके, यात्रा युरोप
रोमान्टिक, रोमाञ्चक, इटालीको तटमा, ढोका बाहिर फ्रान्सेली आल्प्स मा, वा चीन मा कतै, यी शीर्षहरू 10 चाहेको जोडी भ्रमणहरूले तपाईंलाई अचम्मित पार्नेछ.
1. सबै भन्दा वान्टेड जोडी ट्रिप: पेरिसमा रोमान्टिक सिटी ब्रेक
सबैभन्दा रोमान्टिक चलचित्रहरूको लागि प्रेरणामा, पेरिस एक हलिवुड शैली को जोडी यात्रा को लागी सबैभन्दा रोमान्टिक सेटिंग हो. सबैभन्दा रोमान्टिक शहर, र विश्व मा सबैभन्दा धेरै यात्रा को एक, अझै पनी रहेको छ र जहिले पनि जोडीहरूको लागि सबै भन्दा अपेक्षित गन्तव्य हुन्छ.
यदि तपाइँसँग फ्रेन्च हरेक चीजको लागि उत्कटता छ, patisserie, फ्रेन्च बगैंचा, र आकर्षक गल्लीहरू, त्यसपछि एउटा शहर ब्रेक पेरिस मा तपाईं को लागी आदर्श हो. यसबाहेक, पेरिसको लागि एक रोमान्टिक यात्रा एक जोडी को लागी सबैभन्दा वांछित गन्तव्य हो कि splurging मन पर्छ, र जीवित la vie en गुलाब.
2. सबै भन्दा चाहिएको जोडी इटाली को यात्रा: अमाल्फी तट
खाद्य, लुभावनी दृश्य, र समुद्र, अमाल्फी तट जोडी ट्रिपहरूको लागि सबैभन्दा चाहिने गन्तव्यहरू मध्ये एक बनाउनुहोस्. चट्टानहरूमा रंगीन घरहरू, घुम्ने सडकहरू, र तिम्रो छेउमा समुद्र, के तपाईंलाई केवल एक लाड जोडीहरूको लागि आवश्यक छ’ छुट्टी.
Amalfi कोस्ट एक हो 50 किलोमिटर तट मनमोहक सानो गल्लीहरू, समुद्र तट, र अविस्मरणीय दृश्यको साथ लुकेका यात्रा बस्ने ठाउँहरू. तपाईं यात्रा गर्न सक्नुहुन्छ, वा सनबाथिंग, पकाउँदै, वा एउटा उत्कृष्ट समुद्र किनार रेस्टुरेन्टहरूमा भोजन. Amalfi कोस्ट मा विकल्प अनन्त छन्, इटालियन तटको साथ सानो शहरहरूमा पनि, केवल तपाईंको छनौट लिनुहोस्!
एक ट्रेन संग नेपल्स गर्न मिलान
एउटा ट्रेनको साथ नेपल्समा फ्लोरेन्स
भेनिस एक रेल संग नेपल्स लाई
पिसा एक ट्रेन संग नेपल्स गर्न
3. स्काइको आइल, स्कटल्याण्ड
लुभावनाका चट्टानहरूको साथ, प्राकृतिक दृश्य, र आकर्षक संस्कृति, स्कटल्यान्ड संसारमा सबैभन्दा आश्चर्यजनक स्थानहरू मध्ये एक हो. इज अफ स्काई स्कटल्याण्डको एउटा अत्यन्तै मनमोहक क्षेत्र हो, र तपाईंलाई कम्तिमा पनि आवश्यक हुनेछ2हप्ता यसको धेरै सुन्दरताको आनन्द लिन.
तपाईं दृश्यको प्रशंसा गर्न चाहानुहुन्छ कि, वा एउटा पैदलमा यसलाई पत्ता लगाउनुहोस् धेरै पैदल यात्रा, आइल अफ स्काई एक प्राकृतिक आश्चर्य हो. उदाहरणका लागि, यदि तपाईं एक साहसी जोडी हुनुहुन्छ, त्यसो भए तपाइँले भूगर्भीय गठनको आविष्कार गर्न मनपराउनुहुनेछ Quiraing. अर्कोतर्फ, तपाईं फेरी पूलमा केही रोमान्टिक समय पाउन सक्नुहुन्थ्यो, वा डुन्भेगन महल र बगैचा भ्रमण गर्दै.
अर्को शब्दमा, इस्ले अफ स्काई जोडीहरूको यात्राको लागि अचम्मको गन्तव्य हो, धन्यवाद नेत्रगोलक स्कटल्याण्ड हाईल्याण्ड्स को लागी, उपत्यका, र आश्चर्यजनक तटरेखा. यहाँ, तपाईं हात मा हात हिंड्न सक्छ, केवल सँगै साहसिक मजा लिनुहोस्.
4. सबैभन्दा चाहिएको जोडी स्विट्जरल्याण्ड मा पैदल यात्रा साहसिक
हिउँ चुचुराहरूको साथ, हरियो घासको मैदान, र प्राकृतिक दृश्यहरू जुन चित्रहरूको जस्तो देखिन्छ, स्विजरल्याण्ड एक अद्भुत जोडी यात्रा गन्तव्य हो. स्विजरल्याण्डमा सबैभन्दा चाहिएको जोडीहरू जर्माट हो, राइन फल्स, र Lauterbrunnen उपत्यका. यदि तपाईंलाई रोमांच मनपर्छ भने Zermatt तपाईंको लागि उत्तम स्की गन्तव्य हो, र यदि तपाईं रमणीय सेटिंगमा आराम गर्न चाहनुहुन्छ भने, त्यसो भए लाउटरब्रुनेन उपत्यका आदर्श छ.
स्विजरल्याण्डको अनन्त जोडीहरू यात्रा गन्तव्यहरू छन्, त्यसैले यो वास्तवमै रोमान्टिक भगदडको लागि तपाइँको लक्ष्यहरूमा निर्भर गर्दछ. या त बाटो, तपाईं धेरै रोमान्टिक स्पट पाउनुहुनेछ, दोस्रो हनीमून को लागी, वा केवल किनकि तपाईं एक अर्काको कदर गर्न चाहनुहुन्छ, विशेष अवसरमा. त्यसैले, it is really recommended to plan at least7दिन स्विजरल्याण्ड को यात्रा.
5. भेनिस, इटाली
राम्रो खाना, अचम्मको वातावरण, र धेरै लुकेका रोमान्टिक स्पटहरू. भेनिसको यात्रा प्रत्येक जोडीको बकेट सूचीमा छ. भेनिसमा प्रत्येक वर्ष यात्रा गर्ने पर्यटकहरूको संख्या उल्लेखनीय छ, जे होस्, यसको आकर्षण र सौन्दर्य प्रत्येक पटक तपाईंलाई मोहित गर्नेछ. वास्तबमा, यो धेरै आकर्षक छ, कि तपाइँ सबैलाई थाहा छैन, र तपाइँको रोमान्टिक पलायनमा एक अद्भुत समय छ.
भेनिसको यात्रा एक शीर्ष छ5धेरै चाहिएको जोडीहरू भ्रमण गर्दछ किनकि यो छोटो सप्ताहन्तको लागि उत्तम हो. शहरमा धेरै ठाउँहरू छन्, इटालियन खाना, र अद्भुत आवास विकल्पहरू, त्यसैले तपाईं एक gondola मा स्वर्ग पाउनुहुनेछ. तथापि, यदि तपाईं भाग्न र वरपर इटालियन रत्नहरू पत्ता लगाउन चाहनुहुन्छ भने भेनिस, तपाईं धेरै मध्ये एकमा जान सक्नुहुन्छ भेनिसबाट दिन यात्रा.
6. सबै भन्दा वांटेड जोडीहरू Glamping छुट्टी: फ्रेन्च आल्प्स
Glamping युरोपमा सबैभन्दा तातो यात्रा प्रवृत्ति मध्ये एक हो, फ्रेन्च आल्प्स संग संयुक्त, र तपाईंसँग सब भन्दा रोमान्टिक जोडीहरू छन्’ यात्रा. यस प्रकारको शिविर आधारभूत पाल शिविर भन्दा बढी लाड र विलासी छ. जंगली र भव्य प्रकृतिमा सेट गर्नुहोस्, फ्रान्सेली आल्प्स को लुभावनी विचार संग.
तपाइँको निजी बंगला मा चुपचाप, आरामदायक केबिन, चरिहरु गाउँदै गइरहेको, कफी छ, र सिधा ढोकाबाट पैदल यात्रा गर्दै – काल्पनिक रोमान्स. जब तपाईंको प्रेम गुँड पूर्ण रूपमा सुसज्जित छ, र सबै भन्दा राम्रा स्थानहरूमा, तपाईंलाई अविस्मरणीय रोमान्टिक बिदाको लागि अरू केहि पनि आवश्यक पर्दैन.
एक ट्रेन संग लियोन राम्रो
पेरिस एक ट्रेन संग राम्रो छ
क्यान्स पेरिसको लागि रेलमा
क्यान एक ट्रेन संग लियोन गर्न
7. एम्स्टर्डम: आराम हाउसबोट हलिडे
एम्स्टर्डम युरोपको जोडीहरूको लागि रमाईलो शहरहरू मध्ये एक हो, र हाउसबोट बस्नु एम्स्टर्डमको सबैभन्दा रोमान्टिक हो. हाउसबोटहरू एम्स्टर्डमको आइकनहरू हुन्, नहरहरूमा पार्क. तथापि, एक पटक तपाई भित्र पस्नुभयो, तपाईं यसलाई सुपर आरामदायी पाउनुहुनेछ, घनिष्ठ, र नहरहरूको प्रशंसा गर्दै भीडबाट जोगिएको.
कुनै श .्का बिना, एम्स्टर्डमको भाइबस, वातावरण, संस्कृति, र सुन्दरता संसार भर बाट जोडी प्रभावित. यसबाहेक, शहर र नदी दृश्य, तपाईंको विन्डो बाहिर क्याफेहरू, तपाईंको रोमान्टिक पलायन काल्पनिक हुनेछ.
महान खाद्य बजार, आकर्षक नटिंग हिल, केंसिंग्टन गार्डन, एक जोडी लन्डन को यात्रा एक अविस्मरणीय यात्रा हो. शहरले धेरै गतिविधिहरू प्रदान गर्दछ, त्यसैले तपाइँ सोच्न सक्नुहुन्छ कि यो एक रोमान्टिक getaway को लागी धेरै हो.
त्यसैले, यो केहि अनुसन्धान गर्न लायक छ, सबै भन्दा राम्रो स्थान बाट, र चीजहरू तपाई वास्तवमै गर्न चाहानुहुन्छ. अर्को शब्दमा, बजार र आकर्षणको सूची सँगै राख्नुहोस् तपाई भ्रमण गर्न चाहानुहुन्छ. साथै, धेरैमा ककटेलहरूको लागि प्रशस्त समय दिनुहोस् छत बारहरू. यात्राको सम्पूर्ण सार रोमान्स फिर्ता ल्याउने र सँगै विस्फोट हुनु हो.
9. इटालीमा मोस्ट वांटेड जोडीहरूको भ्रमण: टस्कनीमा वाइन ट्रिप
दाखबारी, रेशमी हरियो पहाडहरू, र इटालियन खाना, इटालेली यात्रा रक्सी राजधानी प्रत्येक जोडीको बाल्टिन सूचीमा छ. दाखबारी संगै हिंड्ने, तपाईंको रातो रक्सीबाट घिसिदै, र शान्त वातावरणमा लिप्त, निश्चित रूपमा तपाई यस कुरामा सहमत हुनुहुन्छ कि टस्कनी ईश्वरीय देखिन्छ.
साँच्चै, टस्कनी हरेक एक बर्ष शीर्ष जोडीहरू यात्रा स्थलहरू मध्ये एक हो. जादू दृश्य र मदिरा दुनिया भर बाट दम्पतीहरु लाई मोहित गर्दछ, तिनीहरूलाई हरेक बर्ष फर्कने बनाउन.
10. सबैभन्दा वान्टेड जोडीहरु चीन मा यात्रा: यूलong्ग नदी
चीन एक आकर्षक गन्तव्य हो, र यूलong्ग नदी सबैभन्दा रमणीय र मनमोहक ठाउँहरू मध्ये एक हो. यूलong्ग नदी ली नदीको अंश हो, लामो र अन्तहीन, हरियो बगैंचा द्वारा घेरिएको, गाउँमा, र धान खेतहरू. यसरी, यूलong्ग नदीको किनारमा एउटा साहसिक कार्य गर्नु जादुई अनुभव हो.
यसका अतिरिक्त प्राकृतिक सुन्दरता, को यूलong्ग नदी धेरै गाउँ र जातीय मानिसहरुको घर छ. यसरी, Yangshuo क्षेत्रमा तपाईंको जीवन शैलीको बारेमा सिक्ने दुर्लभ अवसर हुनेछ, संस्कृति, र कला, शताब्दीयौंदेखि यो भएको छ.
यहाँ मा एक ट्रेन सेव, हामी तपाईंलाई यी मध्ये एउटा योजना बनाउन सहयोग गर्न खुसी हुनेछौं 10 मोस्ट वांटेड जोडीहरू रेलबाट यात्रा गर्छन्.
के तपाइँ हाम्रो ब्लग पोष्ट "१० मोस्ट चाहेको जोडी ट्रिपहरू" तपाईको साइटमा इम्बेड गर्न चाहानुहुन्छ?? तपाईं या त लिन हाम्रो फोटो र पाठ र हामीलाई क्रेडिट लिंक संग यो ब्लग पोस्ट. वा यहाँ क्लिक गर्नुहोस्: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fne%2Fmost-wanted-couples-trips%2F - (को एम्बेड कोड हेर्न एक सानो तल स्क्रोल)
#रोमान्स जोडे CouplesTrips RomanticCities RomanticEurope RomanticTrips RomanticViews